Isikhunta - iMestech Industrial Limited
Isikhunta (isikhunta) nokufa ngamathuluzi okwenza okungahluziwe noma okuluhlaza kube izingxenye ezinesimo esithile nosayizi othile ngaphansi kwesenzo samandla angaphandle. Leli thuluzi lakhiwa izingxenye ezahlukahlukene, futhi isikhunta esihlukile sakhiwa izingxenye ezahlukahlukene. Kungukucubungula okushintsha kakhulu isimo somzimba sokwaziswa ukufeza ukwakheka kwento. Isikhunta nokufa kungamathuluzi okukhiqiza ngobuningi. Ukusetshenziswa kwesikhunta kuthuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kokukhiqiza nokunemba okukhiqizwayo kokukhiqizwa kwezingxenye. Kuyaziwa ngokuthi "umama wemboni".
Isikhunta nokufa kungahlukaniswa ngezigaba ezimbili ngokuya ngezici zazo zokucubungula
1.I-Die: ukusetshenziswa komumo onqenqemeni kungenza ukuhlukaniswa okuqinile okungenalutho (ukuvala isikhala) ngokuya ngesimo se-contour, noma ukugoba i-extrusion molding. Lolu hlobo lokufa lusetshenziselwa ukungabi nalutho, ukukhwabanisa kokufa, isihloko esibandayo nokukhishwa kwezingxenye.
2. Isikhunta: izinto ze-colloidal noma eziwuketshezi zifakwa emgodini wesikhunta, noma izinto eziqinile ziyancibilika emgodini wesikhunta, zigcwaliswe futhi zipholile ukuthola imikhiqizo enesimo esifanayo nesomngundo wesikhunta. Lolu hlobo lwesikhunta lusetshenziswa ezingxenyeni zepulasitiki ekubunjweni komjovo, ekubunjweni kwe-silica gel, ekubunjweni kwensimbi. Ngokuvamile ngaphandle komkhuba, sihlukanisa okufela izinsimbi ezingekho ayoni njenge-aluminium alloy ne-zinc alloy njengokufa
Hot umgijimi isikhunta
Injection isikhunta for yezimoto izingxenye
Metal nginyathela isikhunta
HASCO umjovo isikhunta
Ngokuya ngezinto zokwenziwa kwemikhiqizo eyenziwe ngesikhunta, isikhunta sihlukaniswe saba:
isikhunta sensimbi, isikhunta sepulasitiki, nesikhunta se-pecial.
Isikhunta 1.Metal: kuhlanganise nginyathela die (ezifana blanking die, eguqa die, ukudweba die, flanging die, shrinkage die, undulating die, bulging die, ekwakheni die, njll), ekwakheni die (ezifana die ekwakheni die, ecasulayo die , njll.), extrusion die, die die casting, forging die, njll;
Isikhunta se-2.Nonmetal sehlukaniswe: isikhunta sepulasitiki, isikhunta esingajwayelekile, isikhunta sesihlabathi, isikhunta se-vacuum kanye nesikhunta sikapharafini. Phakathi kwabo, ngokuthuthuka okusheshayo kwamapulasitiki e-polymer, isikhunta sepulasitiki sihlobene kakhulu nempilo yabantu. Isikhunta sePlastiki ngokujwayelekile singahlukaniswa sibe: isikhunta sokubumba umjovo, isikhunta sokubumba i-extrusion, igesi esizwe ukubumba isikhunta, njll
Isikhunta futhi die has a ukunquma nentaba ethile noma ijamo ukuma, futhi blank kungenziwa ahlukaniswe (blanking) ngokuvumelana ukuma nentaba ngokusebenzisa ukuma nentaba onqenqemeni. Ngokusebenzisa ukwakheka komgodi wangaphakathi, okungenalutho kungathola isimo esihambelana nhlangothi-ntathu. I-die ngokuvamile ifaka izingxenye ezimbili: i-die die ne-fixed die (noma i-punch and die), engahlukaniswa futhi ivalwe. Izingxenye ziyakhishwa lapho zehlukaniswa, futhi okungenalutho kujovwa ngomgodi wokufa ukuze wakhe lapho kuvaliwe.
Kukhona izigaba ezintathu ekukhiqizeni isikhunta: 1.Mold design; Ukucubungula 2.mold; 3.Acceptance isikhunta
IMestech inikezela ngamakhasimende ukwakheka kwezingxenye zepulasitiki nezingxenye zensimbi, ukwenziwa kwesikhunta somjovo, isikhunta sokufa nokufaka isikhunta. Futhi ukusetshenziswa kwesikhunta sokukhiqizwa ngobuningi kwezingxenye zepulasitiki, izingxenye zensimbi. Sibheke phambili ekusebenzeni nawe ukukunikeza ukukhiqizwa kwesikhunta kanye nepulasitiki, ukukhiqizwa kwezingxenye zensimbi nezinsizakalo.